Rar qorraxda qorraxda oo loo maro Dhismaha Gimaajii ee Indian Indian American Community Community. Mural by farshaxan Votan Ik oo ay la socdaan Derek Brown.
Xusuusin: Bishii hore, waan ku dhawaaqnay in Aimee Witteman, Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest agaasime, waxay ka degi doontaa booskeedii July 30, 2020. 10 sano ka dib McKnight, Aimee wuxuu door bidaa dhiirrigelinno cusub. Kuwa soo socdaa waa fikradaha kala guurka ah ee Aimee ee dhaqdhaqaaqa cimilada iyo samafalka cimilada, oo ay ku jiraan fikradeeda ku saabsan deeq-bixiyaha cusub ee cimilada ee McKnight.
Markii aan waqtigeygu hoos u dhacayo ee Mu'asasada McKnight oo aan ka qeyb qaato milicsiga iyo qorsheynta waxa ku xiga, aad ayaan u naxay isbedelka ka dhacaya guud ahaan dalkeena. Faafida Covid-19 iyo dilkii George Floyd, Breonna Taylor, iyo Ahmaud Arbery - oo ka mid ah kuwa kale lama tirin — waxay baneeyeen sinnaan la'aantii xanuunka laheyd iyo cunsuriyada qaab dhismeedka ah ee sii socday qarniyo, oo ay ku jiraan halkan halkan Minnesota. Isla mar ahaantaana, mahadnaqayaal habeeyayaal dhalinyaro ah oo hal abuur leh iyo Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madoow, yaa leh kobciyay xaaladaha dhaqdhaqaaqa bulshada ee salka ku haya sanado, waxaan sidoo kale helnaa nafteena waqti macquul ah oo qoto dheer. Waxaan ku nool nahay waxa Madowga Nolosha Madoow cofounder Alicia Garza iyo kuwa kaleba waxay ku tilmaameen daqiiqad "kacdoon, xisaabtan, iyo isbedelo."
Waxa Ay U Baahan Tahay Maalintani
Waa maxay macnaha daqiiqadani isbeddelka loogu talagalay dhaqdhaqaaqa cimilada iyo samafalka cimilada? Dhaqdhaqaaqa Nolosha Madoow wuxuu leeyahay baahi kooban - waa inaan ka leexannaa nidaamyada aan loo sinnayn oo aan maalgashi ku sameynaa hoggaan cusub iyo xalal ku saleysan bulshooyinka ay sida aadka ah u saameeyeen caqabadaha aan wajaheyno. Tani waxay u baahan tahay tilaabooyin ka baxsan “carve-outs” ee ururada ay hogaaminayaan dadka Madowga ah, dadka asaliga ah, iyo dadka midabka leh (BIPOC) iyo wixii ka dambeeya balan qaadyada kaladuwan, sinaanta, iyo ka mid noqoshada. Sida Garza iyo kuwa kaleba caddeeyeen, waxay u baahan tahay taxadar sida waxaan ku hogaamineynaa daqiiqadaan, Hay'ada Caafimaadka Aduunka ayaa na hogaaminaya waqtigaan, iyo sida aan wareejin kheyraadka iyo awooda daqiiqadani. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay dadka cadaanka ah - sida aniga oo kale — in ay la jaan qaadaan saameynta su’aalahan ku yeelan karaan jaaliyadeena, ururada iyo dhaqdhaqaaqa cimilada dhexdeeda.
"Midab-takoorku wuxuu suurta-gal ka dhigayaa inaanay suurtagal noolaan karin oo cunsuriyadda ayaa naga horjoogsata inaan ku guuleysanno jawiga. —AIMEE WITTEMAN, XEERKA DHEXE & HIDDAHA HOOSE
Midab-kala-sooca ayaa ka dhigaysa wax aan suurta gal ahayn in si waara loo noolaado iyo midab-kala sooca ayaa naga horjoogsanaya inaan ku guuleysanno jawiga. Tani waxay muddo dheer u ahayd bulshooyinka BIPOC, oo hadda waa wakhtigii la qaddarin lahaa inay si joogto ah u qiimeeysay inta badan hoggaanka cad ee dhaqdhaqaaqa cimilada. Maalgalinta ayaa ugu horeyn u gudubtay ururada cadaanka hogaamiya iyo kordhinta siyasada qaab dhismeedka sare ee farsamada gacanta ee wax looga qabanayo dhibaatada cimilada. Waxaan qaataa masuuliyada xad dhaafka ah xaga kooxahan doorkeyga gudaheeda tobankii sano ee lasoo dhaafay, sidoo kale waxaan kusii socdaa safarkayga barashada.
McKnight wuxuu ku qaatay waqti iyo ilo kale shaqada sinnaanta midabka gudaha sanadihii la soo dhaafay. Tani waxay aasaas u aastay barnaamijka jawiga cimilada ee cusub, oo ay kujirto ujeedada ah in gaaritaanka himilooyinkeena cimilo ee hamigu ay kuxirantahay dimuqraadiyad caafimaad qabta oo ku saleysan cadaalada midabka iyo dhaqaalaha. Waan ognahay inay jirto meel loo helo faylalka tacliinta loo wajaho dhibaatada cimilada. Si loo gaadho go'aan-baahin dhaqaale oo balaadhan, waa inaanu maal gashanno qoto dheer, badanaa gaabis ah, shaqada dhisida dhaqdhaqaaq awood badan, dhaqammo badan oo isbadal ah.
Deynta Sawirka: Ololaha 100%, sawir sawir Ryan Stopera
Afar Tallaabood oo Tallaabo Loo Qaado
Dhaqdhaqaaqa cimilada iyo samafalka cimilada waxay u baahan yihiin inay la dagaallamaan sida loo xoojiyo loona hormariyo dhaqdhaqaaqa cimilada cunsuriyadda. Waxyaabaha soo socdaa waa afar ficil oo tixgelin la siinayo, marka lagu daro shaqsiyaadka iyo tababarka la-dagaallanka midab-takoorka iyo shaqada dhaqammada kala duwan:
1. Dhis awood ku saleysan dowlad-ku-saleysan caddaalad taasoo sare u qaadeysa hoggaanka cusub. Tani waxay u baahan tahay maalgashi la kordhiyey oo laga soo saaro ururro awood-dhisid iyo awood isukeeniyaal badan leh, sida kuwa kaqeyb galaya Minnesota Ololaha 100%. Shaqadan waxaa hogaamin doona dadka midabka ah, dumarka, iyo dhalinyarada - labadaba hogaamiyaasha bulshada ee hada jira iyo kuwa hada jira — kuwaas oo u baahan doona ilaha iyo awooda ay ku hogaaminayaan cimilada.
Qaabkani wuxuu u aqoonsan yahay istiraatiijiyad ahaan awoodaha ku saleysan dowlad-goboleedku inuu yahay mid miisaan ahaan ka soo horjeedda danaha awoodaha heerka awoodda. Waxay kaloo aqoonsan tahay baahida loo qabo in la dhiso adkeynteena shaqsiyeed iyo wadajirka, oo ay weheliso karti la qabsi, si looga hortago cimilada iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ku dhici doona sannadaha soo socda.
2. Xoojinta abaabulka bulshada iyo dhaqanka sheekada. Waxaan ognahay inay tahay inaan maal gashano abaabul awoodeed oo mudo dheer ah - oo aan kaliya ahayn abaabulida — ee carqaladeeya siyaasada iyo awooda shirkadeed. Maalgashiga dhismaha korantada ee Minnesota iyo Aqalka Dhexe waa inay ku jiraan bulshooyinka reer miyiga iyo reer miyiga iyo sidoo kale aagagga metrooga. Marka lagu daro isticmaalka tababbarka sheeko sidii hab lagu dhaqaajiyo saldhig, sheeko beddelka ayaa dhici karta aasaas ahaan u ballaariso maskaxdeena wixii suurtagal ah, ka qayb qaadashada xaaladaha lagama maarmaanka u ah dhaqdhaqaaq bulsho oo waxtar leh.
Waxaa jira tusaalooyin dhiirigelin leh oo ku saabsan shaqadan. Waxqabadka sheekada Fasalka Jinsiyada waxay isu keentaa fariimo si adag loo tijaabiyay oo leh istaraatiijiyado iyo habab isgaarsiineed hal abuur leh. The Shaybaarka U doodista Cimilada waa mid kale oo la ixtiraamo, laakiin aan la adeegsan karin, ilaha isku-darka iyo kor u qaadista daraasadaha kiisaska wax ku oolka ah iyo moodallo laga dhisayo dhaqdhaqaaqa bulshada, abaabulida qaab-dhismeedka, iyo qaababka sheeko ee jawiga
3. Hal-abuur, isbeddel, iyo soo-saar farshaxanimo iyo hal-abuur. Barnaamijka cimilada ee McKnight wuxuu si sharaf leh u taageeraa kuwa cusub Hant Fund for Cimilada iyo Cadaaladda Jinsiga. Hive waxay matalaysaa mustaqbalka samafalka cimilada. Qaababka kale ee loo adeegsado, Hive-yada dhaqaalaha deegaanka, oo ay ku jiraan shabakadaha baahsan, isbahaysiga, iyo kaabayaasha dhaqdhaqaaqa. Waxay u oggolaaneysaa deeq bixiyayaashu inay qeexaan guusha oo ay abuuraan metrik cabbiraadda horumarka. Its wareegii koowaad ee deeq-bixiyeyaasha waxaa ka mid ah ururada caddaaladda deegaanka ee ku saleysan bulshada, kooxaha ka qeybqaadashada madaniga, iyo dadaallada horseed u ah fanka sida Xarunta Awooda Dhaqanka.
4. U xidh siyaasadaha isbedelka cimilada si looga codsado arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha. Muddo aad u dheer, hay'adda samafalka cimilada iyo dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa si dar dar leh diiradda u saaray xalalka farsamada ee yareeynta gaaska cagaaran halka ay diidayaan dadaallada lagu xirayo siyaasada cimilada caqabadaha bulshada iyo dhaqaalaha. Baarayaasha Jaamacadda California – Santa Barbara iyo the Barnaamijka Yale ee Isgaarsiinta Isbedelka Cimilada waxay tijaabiyeen mala awaalka ah in xirashada siyaasada cimilada ee caqabadaha bulshada / dhaqaalaha ay yareyneyso taageerada bulshada sanadka 2019, iyo mar kale Juun 2020, oo la helay caddeyn lid ku ah. Guud ahaan guddiga, isku xirka ficillada cimilada iyo arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada - sida xirmada kicinta ee 'Covid-19' - waxay kordhineysaa taageerada shacabka ee ficil cimilada federaalka. Sida Dr. Ayana Elizabeth Johnson dhawaan saaray, “Sida aan wax uga qabanno isbeddelka cimilada ayaa go'aaminaya mustaqbalka mustaqbalku u leeyahay aadanaha. Sideed ula tacaali kartaa qalalaasaha wajaha aadanaha adigoon dan ka lahayn aadanaha? ”
Aimee Witteman, xarunta, oo ay weheliso ka qayb galayaasha sanadka 2019 Qaab-dhismeedka Hoggaaminta Nidaamka Nololeed ee Haweenka waqooyiga New Mexico.
Tallaabooyinka xiga ee McKnight
Xitaa markaan ka tago McKnight, waxaan ku faraxsanaan doonaa hay'adda maadaama ay horumar ka sameyneyso hadafkeeda qaado tallaabo geesinimo leh dhibaatada cimilada adoo si aad ah u gooya wasakheynta kaarboonka ee bartamaha-galbeed 2030. Brendon Slotterback u adeegi doona sidii horseed ku-meel-gaar ah, iyo Sarah “Sam” Marquardt wuxuu sii wadi doonaa inuu xiriir muhiim ah la noqdo deeq bixiyaasha. Kelsey Johnson, maamulaha barnaamijka barnaamijka cusub ee kooxda, wuxuu sidoo kale u adeegi doonaa sidii kheyraad. McKnight waxay bilaabi doontaa raadinta qaran ee agaasime barnaamij cusub goor dambe oo xagaagan ah waxayna rajeyneysaa inay ku dhawaaqdo xeeladaha ugu dambeeya iyo hagida barnaamijka Midwest Climate & Energy xilliga dayrta.
Sida aan ugu diyaar garoobayo arimahayga xiga, aad ayaan ugu faraxsanahay fursadda aan kaga qaybqaatay shaqadan. Waxaan rumeysanahay in dadka iyo jaaliyaddu ay leeyihiin xikmad iyo xallin si loo hormariyo xalalka cimilada loona dhiso Minnesota cadaalad badan, waana ku faraxsanahay inaan arko McKnight oo waqtigan la kulmaya rajo, geesinimo, iyo geesinimo.